Noho ny fitombon’ny tahan’ny fanondranana no antony nampiakatra ny vola niditra. Nahitana fihenany anefa ny vidin’ny Nikela teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena tamin’ity taona 2019 raha ampitahaina ny tamin’ny taona 2018. Nihena 11 373 dolara ny taona 2019 raha nahatratra hatramin’ny 13 347 tamin’ny 2018. Tsiahivina fa ny Nikela dia hampiasaina amin’ny fanamboarana fitaovam-pitaterana sy fitaovana amin’ny Inox. Ity farany no miantoka ny fanafarana ny roa ampahatelon’ny fanafarana Nikela maneran-tany. Nahatratra 68,3 tapitrisa dolara ny vola miditra tamin’ny fanondranana ho an’i Madagasikara tao anatin’ny 3 volana voalohan’ity taona 2019 ity, araka ny tatitra navoakan’ny BFM. 44,1 tapitrisa dolara monja ny telovolana voalohan’ny taona 2018. Nahitana fihenany 1,6 tapitrisa dolara indray ny vidin’ny kobalt eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nahatratra 24,6 tapitrisa dolara mantsy ny nampidiriny teo amin’ny kitapom-bolam-panjakana ny telo volana voalohan’ny taona 2018 dia tsy nisy afa tsy 22,6 tapitrisa dolara nandritra ny 3 volana voalohan’ny taona 2019.